Laamaha Willow oo ah walxaha loo yaqaan 'sculptals' | Abuurista khadka tooska ah
Marnaba kama joogsaneyno inaan la yaabno qaar ka mid ah hal-abuurka farshaxan-yahannadan farshaxanka ah. Markan eiyadu waa fannaanad qaadata laamo faro badan oo faro badan si loogu beddelo farshaxanno si fiican ugu habboon kayn kasta.
Tani Sawirqaade Ingiriis ah oo la yiraahdo Anna & Willow, wuxuu ina tusayaa waxa u ahaa dhiirigelintiisa inuu abuuro farshaxanno u waxyoonay dabeecadda lafteeda. Dabeecad siisa wax la mid ah ulaha willow.
Anna waxay ku shaqeysay qalabkan 10 sano kahor markuu qaatay koorso farshaxan. Iyadoo la shaqeyneysa waxyaabo dabiici ah, wuxuu maskaxdeeda u furay adduun cusub, sidaa darteed waxay bilowday inay barato farsamooyinka kala duwan ee dambiilaha; Halkan wicker sidoo kale wax badan ayaa laga shaqeeyaa qaybo badan oo Spain ah.
Aad ayuu ugu riyaaqay barashada kuwaas xirfado dhaqameed inuu awooday inuu ku daro qallooca u gaarka ah geedi socodka barashada. Xirfadlayaashan waxay awood u leeyihiin inay abuuraan dambiilo kala duwan iyo hadiyado yaryar, laakiin farshaxanyahanku wuxuu awood u leeyahay inuu abuuro farshaxanno waaweyn isagoo adeegsanaya farsamadan aadka u dhaqameed.
Nidaamkaaga shaqada ayaa dhaca by sawirro badan ka hor intaanad bilaabin inay dib u qaabeeyaan farshaxanka qalfoof ah looxyo bir ah. Waa markay Anna bilawdo inay isku dhexgasho ulaha safsaf ah si ay u abuurto sawiradaas quruxda badan ee muhiimka ah ee aad ka heli karto sawirrada aan wadaagno.
Qaar ka mid ah way dhaafaan 2 mitir iyo bar dherer ah si loo istaago sida halyeeyada meelkasta oo ay joogaan. Mid ka mid ahi waa haweeney qaansar iyo leebba leh oo si qumman looga arki karo kaynta si ay si weyn ugu milmaan.
Waad heli kartaa Shaqada Anna ee Instagram y sifiican ula soco geedi socodkaaga dhiirigelinta iyo hanashada sheygaas anfacaya iyo kan gaarka ah. Waanu kaa tagnay oo leh noocyo kale oo farshaxanno ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Sawiradan laga sameeyay ulaha willow
Fikradaha in la siiyo farshaxanka Kirismaska